1. Inona ny seranan-tsambo fandefasana？
Raha ny fandefasana ny fangatahan'ny mpanjifa any amin'ny seranana voatondro, raha tsy misy ny fangatahana manokana dia ny seranan-tsambon'i Shanghai.
2. Inona ny fe-potoana fandoavam-bola？
30% mialoha amin'ny alàlan'ny T / T, 70% T / T alohan'ny fandefasana azy, na ny trosa L / C amin'ny fahitana.
3. Inona ny daty fanaterana?
30- 60 andro fanaterana avy amin'ny orinasa aorian'ny nahazoanao ny petra-bola arakaraka ny karazana paompy sy kojakoja samihafa.
4. Mandra-pahoviana ny vanim-potoana fiantohana?
18 volana aorian'ny famoahana ny vokatra avy amin'ny orinasa na 12 volana aorian'ny fampiasana ireo fitaovana ireo.
5. Na hanome fikolokoloana aorian'ny varotra?
Manana injeniera matihanina izahay hanome torolàlana fametrahana sy serivisy fikojakojana aorian'ny fivarotana.
6. Na hanome fitsapana ny vokatra?
Afaka manome karazana fitsapana isan-karazany sy fitsapana amin'ny antoko fahatelo izahay araka ny takian'ny mpanjifa.
7. Azo ampanjifaina ve ny vokatra?
Azontsika atao ny manamboatra vokatra mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
8. Manome santionany ve ianao?
Satria ny vokatra dia namboarina ho vokatra mekanika, izahay amin'ny ankapobeny tsy manome santionany.
9. Inona ny fenitry ny paompy afo?
Paompy afo mifanaraka amin'ny fenitra NFPA20.
10. Inona no fenitra mifanaraka amin'ny paompy simika ataonao?
Araka ny lazain'ny ANSI / API610.
11. Orinasa ve ianao sa orinasa mpivarotra?
Izahay dia mpanamboatra, manana ny orinasanay manokana izahay, nandalo ny rafitra ISO voamarina.
12. Inona no apetraka azonao ampiasaina ny vokatrao?
Afaka manolotra karazana vokatra isan-karazany izahay amin'ny fangatahana famindrana rano, rafitra fanamainana sy fampangatsiahana, fizotran'ny indostria, indostria simika solika, rafitra fananganana, fitsaboana rano an-dranomasina, serivisy amin'ny fambolena, rafitra fiadiana amin'ny afo, fikolokoloana rano maloto.
13. Inona avy ireo fampahalalana fototra tokony homena hanaovana fanadihadiana amin'ny ankapobeny?
Fahaiza-manao, Loha, fampahalalana antonony, Fepetra takiana amin'ny fitaovana, Motor na Diesel entina, Faharetan'ny môtô. Raha paompy turbine mitsangana, mila fantarintsika ny ambanin'ny halavan'ny fotony sy ny fivoahana dia eo ambanin'ny fotony na ambony, raha toa ka paompy voalohany, dia mila fantantsika ny et ny Head ect.
14. Azonao atao ve ny manolotra ny vokatrao izay mety hampiasainay?
Manana mpiasa teknika matihanina izahay, araky ny fampahalalana omenao, ampifandraisina amin'ny zava-misy marina, hahafahanao manoro ny mety indrindra amin'ny vokatrao.
15. Inona avy ireo karazana paompy anananao?
16. Inona ny antontan-taratasy azonao omena ho an'ny teny nindramina?
Matetika izahay dia manolotra lisitr'ireo teny nalaina, fiolahana ary ravin-data, sary ary antontan-taratasy fanandramana hafa ilainao. Raha mila ny fanandramana vavolombolan'ny vavolombelona telopolo ianao dia ho tsara, saingy mila mandoa ny fiampangana ny telopolo ianao.